ဥပဒေအရာရှိများမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၉) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် တက်ရောက်၍ လမ်းညွှန်မှာကြား | Union Attorney General’s Office
ဥပဒေအရာရှိများမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၉) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် တက်ရောက်၍ လမ်းညွှန်မှာကြား
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ဥပဒေအရာရှိအဆင့်-၃ များအတွက် မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်-၂၉ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ မြေညီထပ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်းအမှာစကား ပြောကြားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က သင်တန်းဆင်းအမှာစကားပြောကြားရာတွင် ဥပဒေ အရာရှိများသည် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို အလေးထား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ပြင်ပအသွင်သဏ္ဍာန်သာမက စိတ်ဓါတ် ကောင်းမွန်သည့် ဥပဒေအရာရှိကောင်းများ ဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တည်ဆဲ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မှုခင်းများ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှု ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားလို၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ပေးရသည့်နည်းတူ စွပ်စွဲခံရသူ၏ ဥပဒေပါအခွင့်အရေးများကို ရရှိစေရန် အလေးထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဂတိတရားကင်းရှင်း၍ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားမှသာ အများပြည်သူ၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှု ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် သင်တန်းတွင် အကောင်းဆုံးဆုရရှိသူ ၃ ဦးနှင့် သုတေသနစာတမ်းဆုရ သင်တန်းသားအဖွဲ့တို့ကို ဆုများ အသီးသီး ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
သင်တန်းသို့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ ၂၈ ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ ရက်ပေါင်း ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Since: 08/01/2013 - 19:50
Copyright © 2013 - 2017 Union Attorney General’s Office. All rights reserved. Powered by : Information Matrix